midabka midabkiisa loo yaqaan UV-ga ee ...
Dheeha Sare ee Dheeha Cas ...
Midabka midabkeedu yahay Uv ee ...
Midabka Thermochromic ee t ...
Midab sawir qaade ah oo sawir qaade ah ...
midab UV u eg oo loogu talagalay daabacaadda kahortaga been abuurka
Midabka UV-dalafteeda midab ma leh, ka dib markay nuugto tamarta iftiinka 'ultraviolet light' (uv-365nm ama uv-254nm), waxay si dhakhso leh u sii deysaa tamar waxayna muujisaa saameyn midab leh oo midab leh. Marka isha iftiinka laga saaro, isla markiiba way joogsataa oo waxay dib ugu noqotaa asalka asalka ah ee aan la arki karin.
Dheeha Cas ee Fluorescent Red ee Filimka Greenhouse
Dheeh Cas Sare ah waa midabyo heer sare ah oo fulinaya midabaynta balaastigga, waxay leeyihiin jawi heer sare ah, Xasiloonida kuleylka sare, Chroma aad iyo aad u sareeya!
Midabka midabkiisu sarreeyo ee Uv ee daabacaadda kahortaga been abuurka
UV midabkiisu dhalaalayo laftiisawaa mid aan midab lahayn, ka dib markuu dhuuqo tamarta iftiinka 'ultraviolet light' (uv-365nm ama uv-254nm), wuxuu si dhakhso leh u soo daayaa tamar wuxuuna muujiyaa saameyn midab leh oo midab leh. Marka isha iftiinka laga saaro, isla markiiba way joogsataa oo waxay dib ugu noqotaa asalka asalka ah ee aan la arki karin.
Midabka Thermochromic ee ranjiga thermochromic rinjiga thermochromic khad Thermochromic
Midabbada Themochromicwaxay ka kooban yihiin micro-kaabsullo oo midab beddeli kara. Marka heerkulka loo kiciyo heerkul cayiman midabku wuxuu u gudbaa midab ilaa midab la'aan (ama midab ilaa midab kale). Midabku wuxuu ku noqonayaa midabkiisii ​​asalka ahaa markii midabku qaboojiyey.
Midabka midabka sawir qaadaha uv midabkiisu wuxuu u badalaa iftiinka qoraxda
Midab sawir qaade ah waa nooc ka mid ah microcapsules. Iyada oo budada asalka ah lagu duubay microcapsules. Qalabka Powder wuxuu beddeli karaa midabka iftiinka qoraxda. Waxyaabaha noocan ah waxay leeyihiin astaamaha midabka xasaasiga ah iyo awoodda cimilada dheer. Waxaa si toos ah loogu dari karaa iyadoo loo eegayo sheyga ku habboon.